Muslimiinta Kenya oo ku baaqay tilaabo laga qadao dhibaatooyinka ka socda Soomaaliya
NAIROBI,27 April Dadka Muslimiinta ah ee ku nool wadanka Kenya ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Kenya Mio Kibaki in uu ku cadaadiyo Madaxda Migowga Afrika siddii loo baadigoobi lahaa xal kama dambeysay ah oo lagu soo afjaro Colaadaha dabo dheeraaday ee Soomaaliya.
Hogaamiyayaasha Muslimiinta Kenya ayaa ku eedeeyay Madaxda Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay in ay ku guuldareysteen siddii ay u qaadilahaayeen tilaabooyin lagu badbaadinayo dadka aan dambiyada galin ee ku dhimanaya Soomaaliya.
Gudoomiyaha Ururka ay ku mideysdan yihiin Muslimiinta Kenya National Muslim Leaders Farum C/laahi Abdi ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ah in ay jirdileyn 40 Qof oo soomaali ah kuwaas oo ay soo qabqabteen.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Madaxda Midowga Muslimiinta Kenya oo shir jaraa'id ku qabtay Masjidka ugu weyn Kenya ee Jamia Mosque ayaa waxa lagu eedeeyay Ciidamada Itoobiya oo ay ku sheegeen in ay ku tumteen Xaquuqda dadka Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, iyagoo madaafiic la dhacay sida ay culumada carabka ku dhufteen Masaajidyo.
"Bishii lasoo dhaafay Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa Masaajidyo galay, waxa ayna ku dileen in ka badan 21 qof oo ay ku jiraan 8 shiikh, taasi waa tilaabo ka dhana h goobaha barakeysan ee lagu cibaadeysto," ayuu yire Shiekh Cabdi.
"Ciidamo sidoo kale waxa ay galeen Xarumo Caafimaad waxa ayna dileyn bukaano ka hor inta aysan boobin daawooyinkii iyo Qalabkii kale ee Adeega Caafimaadka.sidoo kale Goob wax barasho ayeey ka ka xeysteen 4o Arday ah."
Hogaamiyayaasha waxa ay warsaxaafadeedkooda ku codsadeen in si deg deg ah uga baxaan Ciidamada Itoobiya gudaha Soomaaliya si loo heli wada hadal dhexmara Dhinacyada is haya.
Waxa ay yiraahdeen in Soomaaliya la siiyo fursad ay isku maamusho, iyadoo aysan jirin faragalin meel kale ka timid.
Culumada waxa ay ku baaqeen in la siidaayo dhamaan dadka Xabsiyada ku jira.